ဘုန်းကျော်: ပြောလို့မရရင် ခွဲသာ ခွဲ
အေဘေးလေး ဂုံးကျော် မင်းသွားခွဲပါလား ကချင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး ဟိုးအဝေးကြီး သြဇီကနေ အာ ထုမနေနဲ့
ငါ့ညီပြောမှဘဲ ကချင်တွေ ခေါင်ရည်မူးပြီး ဓါးသိုင်းကနေတာ မြင်မိတော့တယ်။
ဟားဟား ဟား တော်တော်လည်းပြောတတ်ပကွာ။
သူတို့ကလဲ ပြန်ပြောနေတယ် ကောင်းတော့ လချောင်း
ညောင်းတော့ လဥတဲ့။ ကဲ ဘယ်လိုပြောမလဲ
မိမိစကား အပြောအဆို အယူအဆ အတွေးအခေါ်တို.သည် မိမိ၏ အဆင့်အတန်းကို ပြသပါ၏ ။ ထို့အပြင် အကြင်သူသည် ဤတိုင်းပြည်တွင် မွေး ဤတိုင်းပြည်တွင် ကြီးပါလျှက် ဤတိုင်းပြည် အစိုးရကို မကြိုက်တိုင်း အခြားအပြစ်မဲ့ ပြည်သူများကို သေကြေစေလိုသည့် ယုတ်ညံ့သောစိတ်ထားရှိသူဖြစ်ပါက ထိုသူနှင့် သူ၏ မိသားစုများ အထူးသဖြင့် ထိုသူလက်အောက်ဝယ် ကြီးပြင်းလာရသူများ အတွက် ရင်လေးဖွယ်ပင်ဖြစ်တော့သည် ။
(မိမိစကား အပြောအဆို အယူအဆ အတွေးအခေါ်တို.သည် မိမိ၏ အဆင့်အတန်းကို ပြသပါ၏.......... ရင်လေးဖွယ်ပင်ဖြစ်တော့သည် ။) What you means? Phone kyaw is right. we needs to protect the Irrawaddy, if they are not stop, must be boom. that is right things to do. you thinking first who are wrong and who are create the problem for all of civilians?